Indawo yokuhlala yentela: yini, ihluke kanjani kunenhlalo nokuthi ungayiguqula kanjani | Ezezimali Zomnotho
Indawo yokuhlala yentela
Encarni Arcoya | 07/05/2021 08:27 | Umnotho jikelele
Ikheli lezezimali. Impela uyizwile ngezikhathi ezithile, kungaba ngezinqubo ezenziwa noMgcinimafa, noma lapho uphathe amaphepha ahlobene nenkampani yakho. Kodwa leli gama libhekiselephi?
Ingabe ikheli lentela nekheli lenhlalo alifani? Uma imiqondo ingakaze ikucacele, lapha sizoxazulula inkinga ukuze uqonde ngokugcwele ukuthi liyini ikheli lentela nomehluko nalowo owenhlalo, nokuthi ungawushintsha kanjani.
1 Lithini ikheli lentela
1.1 Ngakho-ke, yini ehlukanisa ikheli lentela kwelibhalisiwe?
2 Yini indawo yokuhlala yentela ye-
3 Ungaligcina kanjani ikheli lakho lentela lisesikhathini noMgcinimafa
3.3 Shintsha ikheli lentela ku-inthanethi
Lithini ikheli lentela
Uma siya ekhasini le-ejensi yentela, basitshela ukuthi ikheli lentela yile:
"Indawo yomkhokhi wentela ebudlelwaneni bakhe ne-Tax Administration."
Ngamanye amagama, kuvamile indawo osebenza kuyo, ngoba iyona edala izibopho zentela zeMgcinimafa. Manje, endabeni yabantu bemvelo, banendawo yokuhlala yentela, kuphela ukuthi, kulezi zimo, intela nendawo yokuhlala (okungukuthi, lapho bahlala khona) kuzofana.
Ngokwalokho esesikubonile kuze kube manje, indawo yokuhlala yentela yinto engabhekisi kuphela kubantu abasemthethweni, kepha nakubantu bemvelo. Futhi, ngalokhu:
Uma ungumuntu wemvelo, ikheli lakho lentela lizoqondana nendawo ohlala kuyo ejwayelekile. Kodwa-ke, uma wenza noma yimuphi umsebenzi wezomnotho, okusho ukuthi, uma uzisebenza, indawo lapho wenza khona umsebenzi ingathathwa njengendawo yokuhlala yentela (uma ungayenzi ngqo ekhaya).
Uma ungumuntu osemthethweni (sikhuluma ngezinkampani noma izinkampani) ngakho-ke into ejwayelekile ukuthi indawo yokuhlala yentela ihluke ngokuphelele kunenhlalo, yize ingahlangana. Isibonelo, ukuthi inkampani nendawo ehlala kuyo kuyafana, noma ukuthi indlunkulu yenkampani iyihhovisi elibhalisiwe likamongameli walokhu.
Ngakho-ke, yini ehlukanisa ikheli lentela kwelibhalisiwe?
Ihhovisi elibhalisiwe nezezimali ngamagama amabili ahluke ngokuphelele. Inkinga ukuthi, njengoba sibonile, bavame ukuhambisana nedatha, ngoba ezenhlalo zingaba yimali futhi okuphambene nalokho.
Futhi ngukuthi umehluko okhona phakathi kwale mibono yomibili ucashile kangangokuba kuyinto ejwayelekile ukuyidida bese ucabanga ukuthi kuyefana. Kepha akunjalo.
Okokuqala, Ihhovisi elibhalisiwe lichazwa kuMthetho Wezinkampani Ezinkulu. Futhi umshushisi? Ikwenza lokho kuMthetho Wentela Jikelele.
Omunye umehluko omkhulu phakathi kwalokhu ukuthi ihhovisi elibhalisiwe liyinto yomphakathi, lapho noma ngubani angafinyelela kuleyo datha futhi athole enkampanini. Ngakolunye uhlangothi, indawo yokuhlala yentela eyimfihlo futhi, imvamisa, nguMgcinimafa kuphela oyaziyo.
Ekugcineni, kufanele sikhulume ngalezo zimo lapho kufanele ushintshe khona ikheli. Uma ngabe okudingayo kunguquko kwezenhlalo, kuzofanela uye kwaMercantile Registry ukuze ukwazi ukukushintsha; komshushisi, kuzofanela ukwenze ngokugcwalisa ifomu 036 bese ucela lokho kuguqulwa; Noma ngokuya kwelinye lamahhovisi e-Tax Agency ukuphatha ushintsho oluzokwenziwa ngokushesha. Vele, kuzimo zombili bazokucela okuthile okufakazela ikheli elisha.
Yini indawo yokuhlala yentela ye-
Kholwa noma ungakukholwa, ngoba uMgcinimafa enye imininingwane ebaluleke kakhulu ikheli lekheli. Futhi kungenxa yokuthi, naye, ungakwazi thola abantu ukuze uhambise amadokhumenti abalulekile kubo. Eqinisweni, uma ungeke ukwazi ukuwathola, noma lolu lwazi alukho kusesimweni, lungaholela ekuhlawulisweni kanzima.
Ngamafuphi, luhlobo lokuxhumana olwedlula i-virtual noma ucingo, ngoba uzokwazi ukuthi kulelo kheli umuntu kufanele abe khona futhi azokwazi ukuthola noma yiluphi uhlobo lwesaziso oluthunyelwe kuye (noma ngisho nokuhlolwa kwabasebenzi noma okufanayo).
Ungaligcina kanjani ikheli lakho lentela lisesikhathini noMgcinimafa
Ngemuva kwalokhu esesikushilo phambilini, impela okubaluleke kakhulu kuwe ukugcina ikheli lentela lisesikhathini futhi livuselelwa ebusweni boMgcinimafa, akunjalo? Yebo, kunezindlela eziningana zokukwenza, ngakho-ke sichaza zonke ukuze ukwazi ukukhetha evumelana nawe kakhulu.
Izindlela zokuqala zokuguqula noma zokushintsha indawo yokuhlala yentela eMgcinimafa yile ngokuya ehhovisi le-Tax Agency. ESpain kunezindawo eziningi ezahlukahlukene, futhi kufanele nje wenze i-aphoyintimenti ezobhekelwa kuyo.
Uma usukhona, uzocela inqubo futhi izophathwa ngesenzo esifanayo. Kwesinye isikhathi bakucela ukuthi ubafundise okuthile okukhombisa ukuthi lolu shintsho lwendlela lwenzekile ngempela, kepha kwezinye izikhathi balushintsha ngqo futhi awusadingeki ukhathazeke futhi.
Awufuni ukuya emahhovisi bese ulinda aze akunakekele? Thatha ifoni, ngoba ingenye yezinqubo ongazenza ngocingo. Okwakho, Kufanele ushayele ku-901 200 345. Lesi Isikhungo Sezingcingo se-Tax Agency.
Uma ingagcwali kakhulu, bazokuhambela ngokushesha futhi kuzodingeka unikeze imininingwane yakho ukufinyelela ifayela lakho ukuze uguqule ikheli lentela elisha olinikezayo.
Shintsha ikheli lentela ku-inthanethi
Izindlela zokugcina ukulungisa ikheli lentela kwenziwa ngekhompyutha. Eqinisweni, kunezinketho ezimbili:
Ungayiguqula esitatimendeni semali engenayo. Uma isikhathi sokuyethula sisebenza, ungasizakala ngaso futhi, ngesikhathi esifanayo naleso osethula ngaso, ushintsha nekheli lakho.
Kusetshenziswa imodeli 036 noma 037 evela kwi-Tax Agency. Lokhu kuvame kakhulu futhi kusebenza kubantu bemvelo nabasemthethweni kanye nabazisebenzayo.
Ukuze ukwenze online kuzodingeka ukuthi ube nohlelo lweCl @ ve, i-DNI ye-elekthronikhi noma isitifiketi sedijithali ngoba, kungenjalo, ngeke sikuvumele ukwenze. Uma unawo, kuzodingeka ukuthi ulande ifomu u-036 noma u-037 bese uligcwalisa ucacise ukuthi kungukuguqulwa kwedatha nokunikeza ikheli elisha lentela. Ungayifaka ku-inthanethi, futhi sincoma ukuthi ugcine umbhalo walokho okwenzile ukuze kuthi, uma kwenzeka okuthile, ubeke izizathu zokuthi ushintsho ulwenze ngokomthetho.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Umnotho jikelele » Indawo yokuhlala yentela
Sepe: idatha yokuqhathanisa
Izilinganiso zikaBenjamin Graham